मिर्गौला कसरी जोगाउने? हरेकले एकपटक पढनुस् पर्ने कुरा ! – Rastriyapatrika
मिर्गौला कसरी जोगाउने? हरेकले एकपटक पढनुस् पर्ने कुरा !
दिनेश गौतम/ झन्डै तीन हजार व्यक्तिको मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ। उनीहरू डाइलाइसिस भए बाँच्ने नभए ज्यान गुमाउने अवस्था छन्। वरिष्ठ मिर्गौला रोगविशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले भन्छन्, ‘मिर्गौला कामै नलाग्ने गरी बिग्रेका व्यक्तिहरू डाइलासिसको पहुँचमा छैनन्। कतिपयले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।’
बच्चादेखि बुढेसकालसम्मका व्यक्तिहरूको मिर्गौला बिग्रेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। डा. काफ्लेका अनुसार वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बिरामीलाई समयमै पहिचान नगर्ने हो भने ३० हजार व्यक्तिलाई डाइलाइसिस दिन सकिँदैन। सरकारले धान्नै सक्दैन।
लक्षणविहीन समस्याका रूपमा मिर्गौला रोगलाई लिइन्छ। नजँचाएका व्यक्तिले आफ्नो मिर्गौला स्वस्थ छ भनेर ढुक्क बन्न नहुने सल्लाह चिकित्सकको छ। तीस वर्ष भएका व्यक्तिले आफूलाई रक्तचाप वा मधुमेह छ भने होसियारी अपनाउनुपर्छ। परिवारका कुनै सदस्यलाई मिर्गौला रोग छ भने अथवा आफू पनि धेरै मोटो भइएको छ भने वर्षमा एकपटक रगतमा क्रियटिनिन र पिसाबमा एल्बुमिन जाँच गराउनुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘लक्षण देखिएको छैन भन्दै कुरेर बस्ने होइन।
पिसाबमा एल्बुमिन गएको रहेछ भने मिर्गौला रोगी हुन थालिएको बुझ्नुपर्छ। मिर्गौला रोगले घन्टी बजाउन सुरु गरेको रूपमा सम्झनुपर्छ। समयमै उपचार नगर्ने हो भने मिर्गौला बिग्रन सक्छ। सुरुमै उपचार गरे निको हुन सक्छ। त्यसैले पिसाबबाट एल्बुमिन जान दिनुभएन। त्यस्तै रगतमा क्रियटिनिन बढेको रहेछ भने मिर्गौला बिग्रन थाल्यो भने बुझ्नुपर्छ। आफूलाई सम्हाल्दै समयमै उपचार सुरु गरियो भने मिर्गौला झन् बिग्रनबाट रोक्न सकिन्छ। मुख बार्ने र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने हो भने मिर्गौला बिग्रनबाट बचाउन सकिन्छ।
कयौं व्यक्तिहरू डाइलाइसिस पाउनुपर्ने तर डाइलाइसिसको पहुँचभन्दा बाहिर बसेका छन्। डाइलाइसिस नपाएर कतिपय ज्यान गुमाइरहेका छन्।मिर्गौला थप बिग्रनबाट बचाउन बिरामीले कसैले औषधि सेवन गरिरहेका छन्। कोही डाइलाइसिस गरी आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। मिर्गौला बिग्रेका सबैले डाइलाइसिस नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। डा. काफ्ले भन्छन्, ‘ती व्यक्ति भाग्यमानी हुन्, जसले डाइलाइसिस पाइरहेका छन्। कयौं व्यक्तिहरू डाइलाइसिस पाउनुपर्ने तर डाइलाइसिसको पहुँचभन्दा बाहिर बसेका छन्।
कयौं व्यक्तिहरू डाइलाइसिस पाउनुपर्ने तर डाइलाइसिसको पहुँचभन्दा बाहिर बसेका छन्। डाइलाइसिस नपाएर कतिपय ज्यान गुमाइरहेका छन्।
डाइलाइसिस नपाएर कतिपय ज्यान गुमाइरहेका छन्।’ सबै जिल्लामा डाइलाइसिस सेवा नहुँदा दुर्गमका बिरामीको बिचल्ली हुने गरेको छ। तर डाइलाइसिसको पहुँच बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिने हो भने कुनै दिन सेवा नै रोक्नुपर्ने स्थिति आउने डा. काफ्लेको दाबी छ। बिरामीको संख्या बढिरहेकाले सेवा दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। मिर्गौला बिग्रेका व्यक्तिमध्ये कति प्रतिशत डाइलाइसिसको पहुँचमा छन् भन्ने आधिकारिक अध्ययन भइसकेको छैन।
मिर्गौला बिग्रेपछि औषधि सेवन गर्ने, डाइलाइसिस एवं प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ। मानव शरीरमा दुइटा मिर्गौला हुन्छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ प्रत्यारोपण सर्जन डा. उत्तम शर्माका अनुसार, एउटा स्वस्थ मिर्गौला भए पनि सहजरूपमा जीवन बिताउन सकिन्छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिको दुइटै मिर्गौला बिग्रेको अवस्थामा नातेदारले आफ्नो स्वस्थ मिर्गौला दान दिएर जीवनदान दिने गरेका छन्। मिर्गौला दान दिनेमा महिला बढी देखिएका छन् भने दान लिएर पुनर्जीवन पाउनेमा पुरुष बढी छन्।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रले मिर्गौला बचाऊ अभियान सुरु गरेको छ। केही वर्षदेखि अमेरिकामा मिर्गौला बिग्रेका व्यक्तिको संख्या बढ्न छोडेको छ। समयमा नै जनचेतना फैलाउन सकियो भने दस वर्षपछि मिर्गौलाका बिरामी तुलनात्मकरूपमा घटाउन सकिन्छ। डा. काफ्लेका अनुसार, मिर्गौलाले दूषित पदार्थ र रगतमा जम्मा भएको बढी पानी शरीर बाहिर फाल्न सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यस्तैगरी रक्तचाप सन्तुलनमा राख्छ। रगत बनाउन मद्दत गर्छ। हाडलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ। त्यसैले गर्भवती अवस्थामा आमाले स्वस्थ पौष्टिक खाना खान नपाएको अवस्थामा जन्मिएको बच्चाको मिर्गौला कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले गर्भवती अवस्थामा रहेका आमाले खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। रक्तचाप सन्तुलित अवस्थामा राख्नुपर्छ। धूमपान, मद्यपानले मिर्गौला रोग बढाउँछ। समयमा सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ। नियमित सात घन्टा सुत्नुपर्ने डा. काफ्लेको सुझाव छ। घरबाहिरका खाना स्वस्थ नहुने भएकैले घरकै सन्तुलित दाल, भात, तरकारी, सागसब्जी, दूध, दही, फुलफूल सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। तारेको, भुटेको खानेकुरामा जोड दिनु हुँदैन।
मिर्गौलाका बिरामी ढिलो भइसकेपछि मात्र उपचार गर्न जाने गरेका छन्। ठीकै छु भन्दै हेलचेक्र्याइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। मिर्गौला रोग लागेको वा बिग्रेको लक्षण निकै ढिलो मात्र देखा पर्दछ। ८० प्रशित मिर्गौला बिग्रियो भने मात्र लक्षण देखा पर्ने डा. काफ्ले बताउँछन्। त्यतिबेला उपचार गर्न आउँदा चिकित्सकले मिर्गौला धेरै बिग्रेकाले डाइलाइसिस गराउनुपर्ने सझुाव दिने गरेका छन्। त्यसबेला बिरामी र अन्य नातेदारहरू छाँगाबाट खसे झैं हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
स्वस्थ राख्ने उपाय
सक्रिय जीवन जिउने।
समयमा सुत्ने एवं उठ्ने।
रगतमा चिनीको मात्रा सन्तुलनमा राख्ने।
रक्तचाप ठीक राख्ने।